Shiinaha ALUMINUM SOLID PANEL warshad iyo alaableyda | Alucosun
ALUMINUM QALABKA SALKA
Alucosun SOLID® waa Aluminium adag oo horay loogu rinjiyeeyay alwaaxyada waaweyn ee aluminium ee leh dhumuc iyo dookhyo kala duwan oo si fiican ugu habboon wajiga, saqafka, codsiyada saqafka. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu adkeysiga badan, aaminka ah, dhaqaale iyo saaxiibtinimada leh ee maalmahan la heli karo.
Alucosun SOLID ® waxaa lagu sifeeyay inuu yahay Class A1 Fire Resistant facade oo lagu tijaabiyey EN13501 iyo cimri dhererkeeda oo loo aaneynayo guryaha dahaadhka PVDF oo leh noocyo kala duwan oo kala duwan iyo dhameystirna ku habboon codsiyada kala duwan.
Alucosun SOLID®waa Aluminium adag oo horay loogu rinjiyeeyay alwaaxyada waaweyn ee aluminium ee leh dhumuc iyo dookhyo kala duwan oo si fiican ugu habboon faseexada, saqafka, codsiyada saqafka. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu adkeysiga badan, aaminka ah, dhaqaale iyo saaxiibtinimada leh ee maalmahan la heli karo.
Alucosun SOLID ® waxaa lagu sifeeyay inuu yahay Class A1 Fire Resistant faistade oo laga tijaabiyay EN13501 iyo adkeysigeeda oo loo aaneynayo guryaha dahaadhka PVDF oo leh midabyo kala duwan oo dhameystiran kuna habboon codsiyada kala duwan.
Sharaxaad Range Heerka
Dhumucdiisuna waxay Panel 2-5mm 2mm, 3mm
Ballaaran 1000-1500mm 1250mm, 1500mm
Dhererka 1000-5800mm 2440mm, 3050mm, 3200mm
Nooca Daaha AA 1000, AA 3003, AA 5052 AA 1100, AA 3003
Miisaanka 8.2kg / m2 loogu talagalay 3mm
Ballaaran (mm) 0 illaa -0.4mm
Dhererka (mm) Mm 3mm
Dhumucdiisuna (mm) 0.2mm
Farqiga Khadka Diagonal (mm) ≤5mm
Toosnaanta Edge (mm Mm1mm
Qalabka Farsamada iyo Jirka
Xajmiga Ultimate 185 Xildhibaan
Soosaarka siligga 165 MPa
Cid dheereynta @ Break 1-4%
Modulus of dabacsanaan 68.9 GPa
Xiirashada Modulus 25 GPa
Awood Shear 110 Xildhibaan
Dhaqdhaqaaqa kuleylka 154 W / mk
Barta Dhalaalka 643 - 654 C
Heerkulka qaboojiyaha 413 C
Culeys Gaara 2.73 G / C
Daahan adag ee Aluminium Pvdf
S.No Halbeegyada Cutub Heerka Imtixaanka Natiijo
1 Nooca daahan - - Dahaarka fluorocarbon ee ku saleysan PVDF 15-20
2 Dammaanadda dahaadhka - - 15-20 sano
3 Gloss @ 60 darajo % ASTM D 523 20-80
4 Qaab-dhismeed (T-foorar) T ASTM D1737-62 2T, dildilaac la'aan
5 Saameyn gadaal ah - iskutallaab - NCCA II-5 No qaado off
6 Qalbi adag-qalin min ASTM D3363 Min.f
7 Adhesion Qalalan Qoyan biyo karkaraya - ASTM D3359, habka 8 37.8 ° C, 24 saac. 100 ° C, 20 daqiiqo. No pick up No qaado off No qaado off
8 Iska caabin ah xoqid litir / mil ASTM D968-93 (Ciida oo dhacay) 40
9 Diidmada Kiimikada - ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 AAMA2605 ASTM D2248-93 Isbadal majiro
10% HCL (Imtixaanka Daqiiqadaha 15)
20% H2SO4 72 Saacadood
20% NaOH 18 Saacadood
Mortar Pat test 24 Saacadood
Sifeeyaha, 3% xal, 38ºC, 72hrs
10 Imtixaanka cimilada-o-mitir - Ugu badnaan 5 cutub 10 sano kadib
Midab haynta ASTM D2244-93 Min 50% 10 sano kadib
Edeynta Gloss ASTM D523-89 Ugu badnaan 8 cutub oo midabbo ah & 6 loogu talagalay
11 Iska caabbinta milixda Hrs ASTM B117-90 Blister-10, qoraa-8, kadib 4000
saacad, 35 ° C ceeryaamo cusbo ah
12 Caabbinta huurka Hrs ASTM D2247-94 Ma jiraan wax nabarro ah Ka dib 4000 saacadood, 100% RH, 38 ° C
Alucosun SOLID® waa la tijaabiyay iyadoo la raacayo EN13501 waxaa isku dhacay fasalka A1 oo macno ahaan ah badeecad aan guban karin. Iyadoo la raacayo nambarka badbaadada nolosha ee NFPA iyo mas'uuliyiinta sharciyeynta ee kala geddisan ee aan guban karin ayaa loo oggol yahay dhammaan noocyada dhismaha iyada oo aan xaddidnayn. Marka la eego, AlucosunSOLID ®leh fasalka A1 waxaa lagu rakibi karaa dhismayaal dherer iyo nooc kasta leh.
Shayga Tijaabinta Natiijo
EN13501-1 Fasalka A1
AS1530.1 Aan guban karin
Aluminium waxaa loo tixgeliyaa sida ugu warshadaynta birta warshadaha; waa ka xor nabaad-guurka biraha culus. Aluminium waa dib loo warshadeyn karaa iyada oo aan tayada wax kala duwanaan. Aluminium dib loo warshadeeyay ayaa ah mid aan laga sooci karin aluminium bikro ah, geeddi-socodka ma soo saarayo wax isbeddel ah oo ku yimaada birta, sidaa darteed aluminium dib ayaa loo isticmaali karaa si aan xad lahayn. Dib u warshadaynta aluminium waxay badbaadisaa 95% kharashka tamarta ee aluminiumka cusub lagu farsameeyo.
Nabaro loo isticmaalay nidaamka rinjiga inta lagu gudajiray soo saarida Alucosun Solid ®aan khatar lahayn. Intii lagu daboolayay Solid Solutions tiknoolajiyada loo adeegsado ka shaqeynta taas oo u oggolaaneysa dareerayaasha laga sii daayo ranjiyeyaasha ayaa la gubay oo dib loogu soo celiyey geeddi-socodka.
MIDOOYINKA iyo DHAMMAADKA
Alucosun SOLID®waa dusha sare ee lagu dhammeeyay PVDF iyo nidaamka rinjiga Nano ee geedi socodka daboolka isdaba-joogga ah kaas oo hubiya tayada iyo joogtaynta u hoggaansanaanta AAMA 2605. Midabada adag guud ahaan waa laba jaakad (26 +/- 1 µm) halka macdantu tahay seddex (3) jaakad (32 +/- 1 µm).
Nidaamka rinjiga oo ka kooban ugu yaraan 70% cusbada PVDF waxaa loo yaqaanaa u adkaysiga hig ee shucaaca UV iyo saameynta deegaanka, sidaa darteed Alucosun SOLID ® waa waxqabad waara oo joogto ah xaaladaha cimilada daran.
Nidaamku wuxuu bixiyaa jaakad cad oo dheeri ah oo leh waxyaabo aad u adag oo iskutallaab ah oo Nano ah oo ku saabsan dhammaystirka PVDF; kaas oo hubiya dusha sare ee siman. Dusha sare oo siman oo nadiif ah ayaa wasakhda iyo siigada ka dhigaysa mid adag in lagu dhego taas oo dhismaha siinaysa muuqaal nadiif ah had iyo jeer. Nano PVDF waa nidaam rinji is-nadiifin ah.
PVDF iyo NANO
Nidaamyada rinjiga ayaa si aad ah u adkeysanaya 15-20 sano oo dammaanad qaad ah.
Gudiyo leh xulashooyin dhameystir kala duwan ayaa laga heli karaa Alucosun SOLID ® si kastaba ha noqotee waxay ku xiran tahay waqti cayiman iyo xaddidaadaha cabbirka. Si dabiici ah ayaa loo ilaaliyaa lakabka anodized lakabyada SOLID waa xoqitaan xoqan oo aad u adag oo bixiya dammaanad ku saabsan 30 Sanado.
Dhammaan farsamooyinka caadiga ah iyo kuwa casriga ah ee loogu talagalay rakibidda Fududyada ayaa loo qaadan karaa rakibidda darbiyada SOLID. Fursad badan oo loogu talagalay hagaajinta qarsoon waxay ka duwan tahay alaabada isku dhafan ee isku dhafan. Qaabab kasta oo isukeen, convex, geeska, safka daboolida, jilicsanaanta, dahaadhka iwm ayaa si fudud loo been abuuri karaa loona rakibi karaa. Si loo helo balaarin kuleyl isku mid ah waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho qaab dhismeed ka hooseeya aluminium. Waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaashid darfaha hal adeegsi iyo jihada hagaajinta labiska si aad u fiican.
Alucosun SOLID® waxaa lagu soo saaraa lakab khafiif ah oo lacquer ah dhinaca gadaal si loo hubiyo isku xirnaanta adag ee xarkaha sidaas darteed waxay si toos ah ugu xirnaan kartaa qeybta hoose iyada oo aan la helin qalab hagaajin kara oo muuqda.
Guddiyada 3 mm dhumucdooda iyo wixii ka sareeya waa aamin in la alxameeyo (ISO 14555: 2017) oo leh boodhadh isteerinka ah oo ku yaal dhabarka dambe ee guddi loogu talagalay hagaajinta qarsoon. Daawaha 3003 iyo 5005 ee loo isticmaalo balastarrada ayaa u wanaagsan ujeeddada alxanka. Alxanka dhinaca dambe ee Guddiyada leh 3 mm iyo wixii ka sareeya saameyn kuma yeelan doono dusha sare ee la dhammeeyay.
Alucosun ® hawlgal ah Wis om Metal Composites Ltd oo brin gs soo saarta alaabtii ugu dambaysay iyadoo lala kaashanayo xarunteena wax soo saar ee dabaaldega oo ku taal Jiangsu, h aving about two dec dec of khibrad hodan ku ah Aluminium Panel Panel.
Alucosun ®sumad bixinaysa dhammaan baahiyahaaga dhismaha qaab dhismeed, haddii ay tahay Facade, Saqafka, Saqafka, Xayeysiinta, Aqoonsiga Shirkadeed. Ku qalabeysan yihiin dhammaan xarumaha gudaha si loo hubiyo wax soo saarka tayada iyo ballanqaadyada gaarsiinta.
Waxaan ku siineynaa alaabooyinka ugufiican ee leh khariidad; oo lagu gaadhay iskudhaf habboon oo khubarada warshadaha ah, tikniyoolajiyaddii ugu dambaysay iyo mishiino casri ah
Xarun la aasaasay oo soo saarta in ka badan 10 Million M2 sanadkiiba, oo leh seddex (3) dhir oo loogu talagalay soosaarida Guddi kala duwan, Dahaarka Midabka oo ay weheliso Sheybaarka Guriga sifiican ugu qalabaysan.
Alucosun ®wuxuu ka shaqeeyaa Bariga Fog, Bariga Dhexe, Yurub iyo Ameerika. Xafiisyadayada goboleed, shuraakada ganacsiga, wakiilo iyo qeybiyeyaasha dhamaan gobolka oo dhan waxay noo suurta gelisay inaan buuxino shuruudahaaga agabkeena qaab dhismeedka iyo adeegyada taageerada meelkasta oo aad uga baahato.
Hore: Alucosun PE
2mm Aluminium Solid adag
Gudida Xayndaabka Birta adag
QALABKA ALUMINUM PANEL (SAXIIX)